बैंकले महिनैपिच्छे ब्याजदर बढाउँदा सामाजिक सञ्जालमा पोखिए व्यवसायीका दुःख - Nepalgunj Business
बैंकले महिनैपिच्छे ब्याजदर बढाउँदा सामाजिक सञ्जालमा पोखिए व्यवसायीका दुःख
बाँके : ‘९ प्रतिशत ब्याज दिने सर्तमा लिएको ऋणको ब्याज बैंकले १४.०६ प्रतिशत पु¥याएछ । यि बैधानिक सामान्तलाई ठिक गर्ने के छ ?’
नेपालगन्जका प्रतिष्ठित व्यवसायी र सामाजिक अभियानता समेत रहेका मधुसुदन शर्माले सोमबार बिहानै सामाजिक सन्जाल फेसबुकमा यस्तो स्ट्याटस राखेर जथाभावी ब्याजदर बढाउने बैंकको प्रणालीप्रति आक्रोस व्यक्त गरे । ऋण दिएको ब्याज संधै बढाईराख्ने बैंकहरुप्रति व्यवसायीहरुले कमै खुलेर बोल्छन् । तर शर्माले यस्तो स्ट्याटस् फेसबुकमा राखेपछि अधिकांस व्यवसायीहरुले मनको कुरा लेखेको भावमा बैंकहरु प्रति आक्रोस पोखेका छन् ।
शर्माको फेसबुक स्ट्याटस्मा अहिले बैंकप्रति आक्रोस पोखेर कमेन्ट गर्ने क्रम जारी छ । सुरेश रेग्मीले त बैंकको नामै लेख्दै महिनै पिच्छे बैंकले ब्याजदर बढाएको बताएका छन् । उनले लेखेका छन्,—‘ मेरो त ६. ५ प्रतिशत सम्झौता गरेको एक महिनापछि ९ प्रतिशत, ४ महिनापछि १२. ५ प्रतिशत पु¥यायो अचम्मै परे । ललीपप देखायो गाडी लोन बम्पर अफर एसबिआई बैंक ।’ बैंकको यस्तो कार्य नियन्त्रण गर्न नसकेको भन्दै सामाजिक सन्जालमा सरकार र राष्ट्रबैंकप्रति तिब्र आक्रोस समेत पोखिएको छ ।
सेम शाक्यले ब्यंग्य गर्दै ‘ राष्ट्र बैंक प्रगति रिर्पोट हेरेर दंग छ’ लेखेका छन् । अभय कुमार बस्नेतले बैंकहरु गुणगर्दी शैलीमा लागेको र सरकारले सिण्डीकेट तोड्न नसकेको बताएका छन् । उमेश कुमार शर्माले बैंकको यस्तो कार्यप्रति आफुहरुले केही गर्न नसक्ने उल्लेख गरेका छन् । सबै मानिसहरु पार्टीसंग जोडिएकाले स्वार्थ बाझिएको र त्यसले गर्दा बैंकहरुले जे मन लाग्यो त्यही गर्ने गरेको बताए ।
जाकिर हुसेनले ‘लुट छ हजुर, लुट छ बैंकको’ लेखेका छन् । यस बिषयमा उद्योग वाणिज्य संघ लगायतका व्यवसायी सम्बद्ध निकाय बोल्नुपर्ने आवाज समेत उठाईएको छ । तर त शंकर शर्मा उनै संगठनका अगुवाहरुको बैंकमा लगानी भएकाले केह गर्न नसक्ने पनि टिप्पणी गरेका छन् ।
स्केच : कारोबार दैनिकबाट
प्रकाशित मितिः सोमवार, मंसिर १७, २०७५ 12:06:34 PM